Sana Ashraf Sharif Muxsin, oo ah farshaxan Soomaaliyeed oo sawir gacmeed ku sawirtay muuqaal wanaagsan oo uu dalku leeyahay - WalWaal Online News and Information about Somalia
Home Wararka Sana Ashraf Sharif Muxsin, oo ah farshaxan Soomaaliyeed oo sawir gacmeed ku...
Sana Ashraf Sharif Muxsin, oo ah farshaxan Soomaaliyeed oo sawir gacmeed ku sawirtay muuqaal wanaagsan oo uu dalku leeyahay
Sana Ashraf Sharif Muxsin oo 21 jir ah ayaa ku nool magaalada Muqdisho ee dalka Soomaaliya. Waxay doonaysaa inay dalkeeda ka caawiso muuqaalkii uu ku reebay dagaalladii sokeeye iyo kuwii ka dambeeyay tobannaankii sano ee lasoo dhaafay iyada oo adeegsanaysa sawirradeeda.
Farshaxanka wadamo badan oo weli uu ka aloosan yahay dagaal, ayaa maamullada kali-taliska ah iyo kuwa rabshadaha wata u arkaan mid muujinaya mucaaradnimo.
Farshaxaniistuhu waa naadir gudaha Soomaaliya, waa mihnad xaaran loo yaqaan oo mar kaliya ku dhacday aragtida xagjirnimada Islaamiga ah.
Sanado badan oo amni darro ah oo ay ku asteeyeen weerarro ba’an oo ay gaysteen kooxda xidhiidhka la leh Al-Qaacida ee xagjirka ah ee Al-Shabaab ayaa dalka ragaadiyey.
Sana Ashraf Sharif Muxsin ayaa la kulantay mucaaradad aad u badan. Waxay ku nooshahay oo ay ka shaqeysaa burburka dhismihii adeerkeed oo qayb ahaan ku burburay dagaalladii Muqdisho.
“Anigoo ah haweeney Soomaaliyeed iyo farshaxan waxaan jeclahay dalkayga, tan iyo markii aan ka soo gudubnay 30-sano oo burbur ah, dadkuna waxay arkaan waxyaabo xun xun, aniga oo maskaxda ku haya dhiig daatay burbur iyo qaraxyo, waxaan aaminsanahay inaan taas ku bedeli karo farshaxankayga. waxaan leeyahay wax qurux badan ha arkaan oo ha dhisaan niyadooda,” ayay tidhi.
In kasta oo ay jiraan caqabado, oo ay ku jiraan rumaysashada qaar ka mid ah Muslimiinta oo ah in Islaamku mamnuucay dhammaan matalaadda dadka, iyo halganka lagu doonayo in dhab ahaan loo helo agab lagu soo saaro rinjiyeynta, Sana waa rajo.
“Waan jeclahay shaqadayda, waxaana aaminsanahay inaan ka qayb qaadan karo dib u dhiska iyo nabadaynta dalkayga,” ayay tiri.
Sana, oo ah ardayad wax ka barata cilmiga injineernimada, waxa ay bilawday sawir-gacmeed iyada oo 8 jir ah, iyada oo raacaysa wadadii abtigeed hooyadeed la dhashay, Cabdikariim Cismaan Caddow, oo ahaa farshaxan caan ah.
Waxay bilawday inay dhuxul ku isticmaasho gidaarada gurigeeda, ka dib waxay u gudubtay samaynta buug sawir-gacmeed oo ay ku sawiran yihiin agabka guriga sida kabo ama caagad biyo ah.
Laakin shaqadeedu waxay soo jiiday dareenka dadwaynaha sannadihii la soo dhaafay, xiisaha qaarkii ayaa raacay. “Mar mar ayaan naftayda u baqaa,” ayay tiri, waxayna soo xusuusatay iska hor imaad ka dhacay carwo dhawaan lagu qabtay Jaamacadda City ee Muqdisho.
Arday ayaa bilaabay inuu ku qayliyo “Tani waa khalad!” macalimiintuna waxay isku dayeen in ay dejiyaan iyaga oo sharxaya in farshaxanku yahay qayb muhiim ah oo ka mid ah adduunka.
Dad badan oo Soomaaliya ku nool ayaan fahmeyn farshaxan ama sawir gacmeedka ayay tiri Sanca, qaarkoodna waxay ku tilmaamaan wax laga yaqyaqsado.
Bandhigyada, waxay isku daydaa inay dadka fahamsiiso in farshaxanku faa’iido u leeyahay uu na yahay”hub loo isticmaali karo waxyaabo badan.”
Macallin ayaa mar ku xujeeyay xirfadaheeda isagoo su’aalo weydiinaya una baahan inay bixiso jawaabo qaab sawir ah, ayay tiri.
“Wax kasta oo la sameeyay marka hore waa la sawiraa, waxa aan samaynayna maaha dharka laakiin wax bedelaya dareenkaaga gudaha,” Sana ayaa tiri.
“Sawirradayadu waxay la hadlaan dadka.”
Shaqadeeda xilliyada qaar waxa ay sahmineysaa arrimaha bulshada ee Soomaaliya quseeya, oo ay ka mid tahay sawir-gacmeedka askariga oo eegaya burburka xaruntii ugu horreysay ee baarlamaanka dalka.
Waxay ka tarjumeysaa khilaafka siyaasadeed ee hadda u dhaxeeya dowladda federaalka iyo mucaaradka, ayay tiri, maadaama doorashooyin qaran ay dib u dhacayaan.
Sawir kale ayaa ka tarjumaya xadgudubyada ka dhanka ah haweenka da’da yar ee nugul “kuwaas oo aan xitaa sheegi karin.”
Midka saddexaad wuxuu muujinayaa haweeney ku labisan dharka garbaha qaawan oo caan ka ah Soomaaliya tobannaan sano ka hor inta aan si wanaagsan loo fasirin diinta Islaamka, culumaduna waxay ku booriyeen haweenka inay xidhaan xijaabka.
Laakiin Sana waxay sidoo kale ku dadaalaysaa inay quruxdeeda ku soo saarto shaqadeeda, iyadoo og “Waxaan ka soo gudubnay 30 sano oo burbur ah, dadkuna waxay arkaan wax xun oo kaliya, iyagoo maskaxdooda ay ku jirto dhiig iyo burbur iyo qaraxyo. … Haddii aad Google ka gasho waad yaabaysaa waxa sawir xun meeshaa ka buuxa,. aad ayey u yar yihiin sawirada quruxda badan, laakiin kuwa fool xun baa ka buuxa, markaa waxaan jeclaan lahaa inaan beddelo waxaas oo dhan anigoo isticmaalaya sawir-gacmeedkayga.”
Sanca waxay u taagan tahay inay jebiso caqabada jinsiga si ay u gasho xirfad ay raggu u badan yihiin, sida uu sheegay Cabdi Maxamed Shucayb, oo ah bare wax ka dhiga Jaamacadda Ummadda Soomaaliyeed.
“Farshaxanka waxaa loo isticmaali karaa hub ahaan & si wanaagsan. Farshaxanka iyo sawiradu waxay dhisi karaan waddan dhan waxayna sidoo kale burburin karaan waddan iyagoo ku xidhan qofka rinjiyeynaya,” ayuu yidhi.
Sana waxa ay sheegtay in ay rajaynayso in ay kalsooni dheeraad ah ku hesho shaqadeeda iyada oo si ballaadhan u soo bandhigtay, iyadoo ku dartay dhacdooyin ka baxsan Soomaaliya oo khuseeya dalka deriska la ah ee Kenya.
Laakin u helida tusaaleyaal ku dayasho mudan oo ay guriga ku heshaa mihnadeeda si fudud kuma timaado.
Sanna waxay magacawday dhowr farshaxan oo Soomaaliyeed oo ay aad ula dhacsan tahay howlahooda shaqo, balse ma taqaano gabdho kale oo farshaxan ama gacantooda wax ku sawira oo iyada la mid ah.
Previous articleDhismaha dhuumaha saliida ee Uganda ayaa caqabad wajahaya
Next article18 dead in Niger gold mine collapse